Xiisada dowladaha Faransiiska iyo Turkiga oo weji cusub yeelatay
Ankara iyo Paris ayaa gorada iskula jira iyagoo ay barataarayaan xulafo kala duwan.
PARIS, France – Xiisada diblumaasiyadeed ee Faransiiska iyo Turkiga ayaa waji cusub yeelatay markii xukuumadda Paris ay taageertay soo jeedin lahayd in cunaqabateyn la saaro dhigeeda ay is-hayaan ee Ankara.
Soo-jeedintaas ayaa ka timid Qubrus oo kamid ah wadamada ay gorada isku-galeen Turkiga markii uu bilaabay sahminta shidaal ee uu ka wado bariga Mediterranean, halkaasoo ay si wadajir ah uwada sheegtaan.
Gariiga iyo Qubrus oo isku-dhac ah ayaa taageero ka helaya Midowga Yurub iyo qaar kamid ah dowladaha reer Galbeed sidda Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska, Clement Beaune, ayaa carabka ku dhuftay in xayiraada ay tahay fursada u banaan wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub hadii Turkiga oo ku xadgudbo wadan ururkooda kamid ah.
"Waanu tixgelin doonaa cunaqatabeynta.Golaheena wuu soo saari doonaa hadii mid kamid ah wadamada naga midka ah lagu xadgudbo madax-banaanidiisa," ayuu ku sheegay shir jaraa'id oo uu warbaahinta kula hadlay.
Hadal-jeedintaan ayuu sameeyay kadib wadahadalo uu la yeeshay dhigiisa arrimaha dibadda waddanka Qubrus, Nikos Christodoulides.
Illaa haatan lama ogga, nooca ay noqon doonto xayiraadaa, balse waxaa loo badinayaa in ay si toos ah u saameyn doonto howlaha soconaya.
Madaxda Turkiga iyo Faransiiska ayaa horey hadalo xanaf leh hawada isku-mariyey, iyagoo isugu goodiyey talaabooyin diblumaasiyadeed hadii midba kan kale uu ka joojin waayey wax ay ugu yeereen "garawada uu wado".
Dagaalka Nagorny Karabakh oo sii kala fogeeyay Turkiga iyo Faransiiska
Caalamka 01.10.2020. 07:30
Ankara iyo Paris ayaa mar kale waxay hawada isku mariyeen hadalo hanjabaad ah.
Jenaraalo loo xiray inqilaabkii Turkiga oo 141-sano oo xabsi lagu xukumay
Caalamka 20.06.2019. 13:56
Dhacdooyin naadir ah oo lagu arkay doorashada gobolada ee Turkiga
Caalamka 31.03.2019. 15:39